Mavairasi muGNU / Linux: Chokwadi kana Ngano? | Kubva kuLinux
Mavairasi muGNU / Linux: Chokwadi kana Ngano?
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Zvimwe, Yakurudzirwa
Chero nguva iyo gakava pamusoro Virus y GNU / Linux hazvitore nguva kuti mushandisi aoneke (kazhinji Windows) inoti chii:
«MuLinux hamuna mavhairasi nekuti ivo vanogadzira aya mapurogiramu akashata havapedze nguva vachiita chimwe chinhu cheSystem Inoshanda isingashandiswe nemunhu.
"Dambudziko harisi iro, asi vagadziri vezvirongwa zvakashata izvi havazopedza nguva kugadzira chimwe chinhu chichagadziriswa neyekutanga kugadzirisa kwesisitimu, kunyangwe mumaawa asingasviki makumi maviri nemana"
Uye ini ndaive ndisina kukanganisa, sezvo ichi chakanakisa chinyorwa chakaburitswa mu Nhamba 90 (Gore 2008) kubva kuTodo Linux Magazine. Mutambi wake David Santo Orcero inotipa nenzira yehunyanzvi (asi zviri nyore kunzwisisa) tsananguro nei GNU / Linux inoshaya iyi mhando ye software yakaipa.
100% yakakurudzirwa. Zvino ivo vanozove nezvinhu zvinopfuura zvinogutsa zvekunyaradza chero munhu anotaura asina hwaro hwakasimba panhau iyi.
0.1 Dhawunirodha Chinyorwa (PDF): Ngano uye chokwadi: Linux uye mavairasi
1 Chii chinonzi hutachiona?
2 Kuendesa hutachiona muLinux:
3 Iko kuvakwa kweUnix zvakajairika uye Linux kunyanya hakuiti kuti kupararira kwemavhairasi kuitike.
3.1 Chiitiko changu semutungamiriri:
4 Kutadzira zvinoitwa paLinux:
5 Nhema uye nhema:
6 Antivirus yeLinux:
Dhawunirodha Chinyorwa (PDF): Ngano uye Chokwadi: Linux uye maVirusi
Hechino chinyorwa chakanyorwa, apo isu tichifunga kuti zviri nyore kwazvo kuverenga nenzira iyi:
Iyo Linux nehutachiona gakava haisi chinhu chitsva. Nguva dzose kazhinji tinoona email pane rondedzero ichibvunza kana paine hutachiona hweLinux; uye otomatiki mumwe munhu anopindura zvine mutsindo uye anoti kana asiri akakurumbira ndeyekuti Linux haina kupararira seWindows. Iko kune zvakare kunowanzo buritswa kuburitswa kubva kune antivirus vagadziri vachiti ivo vanoburitsa vhezheni dzeLinux mavhairasi
Ini pachangu ndakamboita imwe hurukuro nevanhu vakasiyana nepositi, kana nerugwaro rwekugovera, zvine chekuita nenyaya yekuti mavhairasi aripo kana kwete muLinux. Iyo ngano, asi yakaoma kuputsa ngano kana, panzvimbo pezvo, kunyepedzera, kunyanya kana kuchikonzerwa nehupfumi. Mumwe munhu anofarira kuburitsa pfungwa yekuti kana Linux isina mhando dzematambudziko, imhaka yekuti vashoma vanhu vanoishandisa.
Panguva yekutsikisa chirevo ichi, ndingadai ndaifarira kunyora chinyorwa chakajeka pamusoro pekuvapo kwemavirusi muLinux. Nehurombo, kana kutenda mashura uye hupfumi zvikawanda, zvinonetsa kuvaka chimwe chinhu chechokwadi.
Nekudaro, isu tichaedza kuita nharo yakakwana zvine hungwaru pano kuti tidzivise kurwiswa kwechero munhu anoda kuipokana.
Chii chinonzi hutachiona?
Chekutanga pane zvese, isu tave kutanga nekutsanangura chinonzi hutachiona chii. Ichi chirongwa chinozviteedzera pachacho uye chinomhanya choga, uye icho chakanangana nekugadzirisa mashandiro anoita komputa, pasina mvumo yemushandisi kana ruzivo. Kuti uite izvi, mavhairusi anotsiva mafaera anogona kuitiswa nevamwe vane hutachiona nekodhi yavo. Tsananguro yacho yakajairika, uye ipfupi-mutsara pfupiso yeiyo Wikipedia yekupinda pamavhairasi.
Chikamu chakakosha chedudziro iyi, uye iyo inosiyanisa hutachiona kubva kune imwe malware, ndeyekuti hutachiona hunozvimisikidza pachayo, pasina mvumo yemushandisi kana ruzivo. kana ikasazvimisikidza pachayo, haisi hutachiona: inogona kunge iri rootkit, kana Trojan.
A rootkit kernel chigamba iyo inokutendera iwe kuti uvanze mamwe maitiro kubva kune mushandisi nzvimbo zvinoshandiswa. Mune mamwe mazwi, iko kuchinjiswa kwekernel sosi kodhi ine chinangwa ndechekuti izvo zvinoshandiswa zvinotibvumidza kuona izvo zviri kumhanya chero nguva ipi neipi hazvifungidzire imwe nzira, kana mumwe mushandisi.
Iyo Trojan yakafanana: iko kuchinjiswa kune iyo sosi kodhi yeiyo chaiyo sevhisi yekuvanza zvimwe zvekunyepedzera zviitiko. Muzviitiko zvese izvi, zvakakosha kuti uwane kodhi yekodhi yeiyo chaiyo vhezheni yakaiswa pamushini weLinux, chigamba kodhi, kuisanganisa, kuwana ropafadzo dzemutungamiri, kuisa zvigadziriswe zvinogoneka, uye kutanga sevhisi - mune iyo Trojan- kana iyo inoshanda sisitimu. complete - mune nyaya ye
rootkit–. Maitiro, sezvatinoona, haasi madiki, uye hapana munhu anogona kuita zvese izvi "nekukanganisa". Ose ari maviri anoda mukumisikidza kwavo kuti mumwe munhu ane manejimendi ropafadzo, achiziva, anoita akateedzana nhanho kuita sarudzo dzehunyanzvi hunhu.
Izvo zvisiri zvisingakoshi semantic nuance: kuti hutachiwana hwazvimisikidza hwayo, zvese zvatinofanirwa kuita kumhanyisa chirongwa chinotapukirwa semunhuwo zvake mushandisi. Kune rimwe divi, kuitira kuiswa kwe rootkit kana Trojan zvakakosha kuti munhu ane hutsinye apinde munhoroondo account yemuchina, uye nenzira isiri-yemagetsi, anoita akateedzana nhanho dzinogona kuoneka. hutachiona hunopararira nekukurumidza uye nemazvo; rootkit kana Trojan inoda ivo kuti vatitevere isu chaizvo.
Kuendesa hutachiona muLinux:
Iyo yekufambisa nzira yehutachiona, nekudaro, ndiyo inonyatsoritsanangura saizvozvo, uye ndiyo hwaro hwekuvapo kwavo. an operating system is most sensitive to viruses the easier it is to develop an efficient and automated transmission mechanism.
Ngatitii tine hutachiona hunoda kuzviparadzira. Ngatitii yakavhurwa neyakajairika mushandisi, vasina mhosva, kana uchivhura chirongwa. Utachiona uhu hunongova nenzira mbiri dzekutapurirana:
Zvipindure pachezvayo nekubata ndangariro yemamwe maitiro, uchizvisungirira kwazviri panguva yekumhanya.
Kuvhura iyo inogadziriswa yefaira, uye nekuwedzera yavo kodhi -payload- kune inogoneka.
Mavhairasi ese atinogona kufunga seakadai ane imwe yeidzi nzira mbiri dzekutapurirana. O Ivo vaviri. Hapasisina michina.
Nezve maitiro ekutanga, ngatirangarirei chaiwo memory memory yeLinux uye mashandiro eIntel processor. Aya ane zvindori zvina, zvakaverengwa kubva pa0 kusvika pa3; iyo yakadzikira iyo nhamba, inowedzera iwo maropafadzo ayo kodhi inomhanya mune iyo mhete anayo. Aya mhete anoenderana nehurumende dze processor, uye, nekudaro, chii chingaitwe nehurongwa huri mune yakatarwa mhete. Linux inoshandisa chindori 0 cheiyo kernel, uye rin'i 3 yemaitiro. hapana kodhi yekumhanyisa inomhanya pamhete 0, uye hapana kernel kodhi inomhanya panhete 3. Panongova nenzvimbo imwechete yekupinda kune kernel kubva kuringi 3: iyo 80h inokanganisa, iyo inobvumidza kusvetuka kubva kunzvimbo kwayiri iyo mushandisi kodhi kunzvimbo iyo kernel kodhi iri.
Iko kuvakwa kweUnix zvakajairika uye Linux kunyanya hakuiti kuti kupararira kwemavhairasi kuitike.
Iyo kernel nekushandisa chaiyo memory inoita kuti yega yega maitiro itende kuti ine zvese ndangariro kune iyo yega. Maitiro - ayo anoshanda murin'i 3-- anogona kungoona iyo chaiyo ndangariro iyo yakagadzirirwa iyo, kune mhete iyo mairi inoshanda. Hakusi kuti ndangariro dzedzimwe nzira dzinodzivirirwa; ndeyekuti kune imwe nzira kurangarira kwevamwe kuri kunze kwenzvimbo yekero. Kana maitiro aifanira kurova ese kero dzekurangarira, zvaisazombokwanisa kutarisa kero yekurangarira yeimwe maitiro.
Sei izvi zvisingakwanise kubiridzirwa?
Kugadzirisa zvakataurwa - semuenzaniso, gadzira mapinda ekupinda munhete 0, gadzirisa zvinokanganisa maveji, gadzirisa memory chaiyo, gadzirisa LGDT… - zvinokwanisika kubva kuringi 0.
Ndokunge, kuti maitiro akwanise kubata ndangariro yemamwe maitiro kana kernel, inofanira kunge iri tsanga yacho pachayo. Uye iyo chokwadi chekuti pane poindi imwechete yekupinda uye kuti ma parameter akapfuurwa mukati mezvinyorwa zvinomisikidza musungo - kutaura zvazviri, inopfuurwa nerejista kusvika chekuita, icho chinozoitwa sechiitiko mune yekutarisisa maitiro. kukanganisa kwe80h.
Chimwe chiitiko inyaya yekushandisa masisitimu ane mazana emahofisi asina magwaro ekuridza 0, uko izvi zvinogoneka - panogona kugara paine kukanganisika kushevedzwa kufona uko musungo unogona kukudziridzwa - asi kana iri yehurongwa hwekushanda ne yakapusa nhanho michina, hazvisi.
Neichi chikonzero, iyo yechokwadi memory yekuvakisa inodzivirira iyi yekufambisa mashandiro; hapana maitiro - kunyangwe avo vane midzi yerombo - vane nzira yekuwana ndangariro dzevamwe. Tinogona kupokana kuti maitiro anogona kuona kernel; iine mepu kubva kune yayo inonzwisisika memory kero 0xC0000000. Asi, nekuda kwerin'i processor inomhanya, haugone kuigadzirisa yaizoburitsa musungo, sezvo dziri nzvimbo dzekurangarira dziri dzeimwe mhete.
Iyo "solution" chingave chirongwa chinoshandura kernel kodhi kana iri faira. Asi chokwadi chekuti izvi zvinodzokororwa zvinoita kuti zvisakwanisika. Iyo bhanari haigone kuve chiumbwe, sezvo paine mamirioni eakasiyana mabanana mabhunari munyika. Zvingori zvekuti kana vachiripamhidzira ivo vakaisa kana kubvisa chimwe chinhu kubva kune kernel inoitiswa, kana kuti ivo vakachinja saizi yemamwe emavara ayo anozivisa iyo yekuunganidza vhezheni - chimwe chinhu chinoitwa kunyangwe vasingazivi - chidimbu chebhinari chaisakwanisa kuiswa. Iyo imwe nzira ndeyekutora kodhi yekodhi kubva paInternet, kuiisa, kuigadzirira iyo yakakodzera Hardware, kuisanganisa, kuiisa, uye kutangazve muchina. Zvese izvi zvinofanirwa kuitwa nechirongwa, otomatiki. Zvakanyanya kunetsa kumunda weArtificial Intelligence.
Sekuona kwedu, kunyangwe hutachiona semudzi haukwanise kusvetuka ichi chipingaidzo. Mhinduro chete yasara ndeye kutapurirana pakati pemafaira anogona kuitiswa. Izvo zvisingashande chero sezvatichaona pazasi.
Chiitiko changu semutungamiriri:
Mumakore anopfuura gumi ini ndanga ndichigadzirisa Linux, nekuiswa pamazana emachina munzvimbo dzemadhata, marabhoritari evadzidzi, makambani, nezvimwe.
Handisati "ndawana" hutachiona
Handisati ndambosangana nemunhu akadaro
Handisati ndambosangana nemunhu akasangana nemunhu akambo
Ini ndinoziva vanhu vazhinji vakaona iyo Loch Ness Monster kupfuura vakaona maLinux hutachiona.
Ini pachangu, ndinobvuma kuti ndanga ndisina hanya, uye ndakaparura zvirongwa zvinoverengeka izvo vanozviti "nyanzvi" vanosheedza "mavhairasi eLinux" - kubva zvino zvichienda mberi, ndichavadaidza kuti mavhairasi, kwete kuti vaite zvinyorwa pedantic -, kubva kuakaundi account yangu ichipesana nemuchina wangu, kuona kana hutachiona hunokwanisika: ese ari maviri bash virus anotenderera akatenderedza ipapo - uye ayo, nenzira, haana kunditapura chero mafaera - uye hutachiona hwakave hwakakurumbira, uye hwakaonekwa mupepanhau. Ndakaedza kuiisa; uye mushure memaminetsi makumi maviri ebasa, ndakakanda mapfumo pasi pandakaona kuti chimwe chezvaanoda kwaive kutora tmp dhairekitori parutivi rwemhando yeMSDOS. Ini pachangu, ini handizive nezve chero munhu anogadzira chaiyo chikamu che tmp uye ochimisa icho kuFAT.
Muchokwadi, mamwe anonzi mavhairusi andakaedza kuLinux anoda huwandu hweruzivo uye password yemidzi kuti iiswe. Tinogona kukodzera, zvirinani, se "crappy" hutachiona kana ichida kupindira kwedu kuti tibate muchina. Uyezve, mune dzimwe nguva ivo vanoda ruzivo rwakakura rweUNIX uye mudzi password; iri kure kure nekumisikidza otomatiki iyo yainofanirwa kuve.
Kutadzira zvinoitwa paLinux:
PaLinux, maitiro anogona kungoita izvo ayo anoshanda mushandisi uye anoshanda boka rinotendera. Ichokwadi kuti kune nzira dzekuchinjisa mushandisi chaiye nemari, asi zvimwe zvishoma. Kana isu tikatarisa kune izvo zvinogoneka zviripo, tichaona kuti chete mudzi une mukana wekunyora zvese mune aya madhairekitori uye mumafaira arimo. Mune mamwe mazwi, chete mudzi unogona kugadzirisa mafaira akadaro. Izvi ndizvo zvave kuitika muUnix kubvira makumi manomwe, muLinux kubvira kwayakatangira, uye mune yefaira system inotsigira rombo rakanaka, hapana kukanganisa kwakatowoneka kunobvumidza humwe hunhu. Maumbirwo emafaira anoshanda eELF anozivikanwa uye akanyatso nyorwa, saka zvinehunyanzvi kuti faira yerudzi urwu irongedze mubhadharo mune imwe ELF faira ... chero bedzi mushandisi anoshanda weboka rekutanga kana rinoshanda revava kutanga vane mukana wekuwana. kuverenga, kunyora uye kuuraya pane yechipiri faira. Mangani mafaira ehurongwa anogona kuitisa seyakajairika mushandisi?
Uyu mubvunzo une mhinduro yakapusa, kana tichida kuziva kuti mangani mafaera atinogona "kutapudza", tinotanga murairo.
Isu hatibatanidze iyo / proc dhairekitori nekuti iri rechokwadi faira system inoratidza ruzivo nezve mashandiro ehurongwa hwekushanda. Iyo faira faira mafaera ane maropafadzo ekuuraya atichawana haaunze chinetso, nekuti iwo anowanzo kuve chaiwo maumbirwo anoita kunge anoverengwa, akanyorwa uye kuurayiwa, uye kana mushandisi akaedza, haatombo shanda. Isu tinorasawo zvikanganiso, zvakawanda - sezvo, kunyanya mu / proc uye / kumba, kune madhairekitori mazhinji uko mushandisi akajairika asingakwanise kupinda - .Script iyi inotora nguva yakareba. Mune yedu chaiyo kesi, mumuchina unoshanda vanhu vana, mhinduro yaive:
Zvinobuda zvinoratidza matatu mafaera anogona kutapukirwa kana fungidziro yehutachiona ikamhanyisa. Iwo maviri ekutanga mafaira eUnix socket mhando anodzimwa pakutanga - uye haakwanise kukanganiswa nehutachiona--, uye chechitatu faira rechirongwa mukusimudzira, iro rinobviswa pese parinogadziridzwa. Utachiona, kubva pakuona kwekuona, hwaisazopararira.
Kubva pane zvatinoona, iyo chete nzira yekuparadzira iyo yekubhadhara ndeyokuva mudzi. Mune ino kesi, kuti hutachiona hushande, vashandisi vanofanirwa kugara vaine mukana wevatungamiriri. Muchiitiko ichocho, inogona kukanganisa mafaira. Asi pano panouya kubata: kupfuudza hutachiona, iwe unofanirwa kutora imwe inoitisa, kuitumira kune mumwe mushandisi anongoshandisa muchina semidzi, uye kudzokorora maitiro.
Muhurongwa hwekushanda panofanirwa kuve mutariri wemabasa akajairika kana kumhanyisa mafomu ezuva nezuva, izvi zvinogona kunge zvakadaro. Asi muUnix zvakafanira kuve maneja kumisikidza muchina uye kugadzirisa mafaira ekugadzirisa, saka huwandu hwevashandisi hunoshandiswa neakaundi account seakaunzi yezuva nezuva ishoma. Zvimwe; kumwe kugoverwa kweLinux hakuna kana account account yakabvumidzwa. Mune angangoita ese, kana iwe ukawana iyo graphical nharaunda seakadaro, iyo yekumashure inochinja kune yakanyanya kutsvuka, uye meseji meseji inodzokororwa inokuyeuchidza kuti usashandise akaundi.
Chekupedzisira, zvese zvinofanirwa kuitwa semidzi zvinogona kuitwa nesudo raira pasina njodzi.
Neichi chikonzero, muLinux anokwenenzverwa haakwanise kutapurira vamwe chero bedzi isu tisingashandise midzi account seyakajairika account yekushandisa; Uye kunyangwe makambani antivirus achisimbirira kutaura kuti kune hutachiona hweLinux, chaizvo chinhu chepedyo chinogona kugadzirwa muLinux iTrojan munzvimbo yemushandisi. Nzira chete iyo maTrojans aya anogona kukanganisa chimwe chinhu pane ino sisitimu ndeyekuimhanyisa semidzi uye neropafadzo dzakakodzera. Kana isu tichiwanzoshandisa muchina sevashandisiwo zvavo, hazviite kuti maitiro atangwa neanowanzo shandisa kukanganisa system.
Nhema uye nhema:
Isu tinowana yakawanda manyepo, kunyepa, uye nekungoreva nhema pamusoro pehutachiona muLinux. Ngatiitei rondedzero yavo zvichibva panhaurirano yakaitika imwe nguva yapfuura nemumiriri wemugadziri weantivirus yeLinux uyo akagumburwa zvikuru nechinyorwa chakaburitswa mumagazini imwe chete iyi.
Iyo nhaurirano muenzaniso wakanaka wekutarisa, sezvo uchibata pazvinhu zvese zvehutachiona muLinux. Tiri kuzoongorora ngano idzi imwe neimwe sezvo dzakakurukurwa munhaurwa iyi chaiyo, asi yakadzokororwa kakawanda mune mamwe maforamu.
"Haasi ese mapurogiramu ane huipi, kunyanya mavhairasi, anoda mukana wemidzi kuti utapure, kunyanya mune yakasarudzika hutachiona hunogadziriswa (ELF fomati) iyo inobata zvimwe zvinogoneka.".
Chero ani anoita chirevo chakadai haazive mashandiro eiyo Unix system inoshanda. Kuti ikanganise faira, hutachiona hunoda mukana wekuverenga-inofanirwa kuverengerwa kuti igadzirise-, uye kunyora - inofanirwa kunyorwa kuti shanduko iite basa- pane iyo faira rinobatika rairi kuda kuita.
Izvi zvinogara zvakadaro, pasina kunze. Uye mune yega yega yega yekugovaniswa, vasiri-midzi vashandisi havana mikana iyi. Zvino nekungove usiri mudzi, hutachiona haugoneke. Empirical bvunzo: Muchikamu chakapfuura takaona yakapusa script kutarisa huwandu hwemafaira anogona kukanganiswa nehutachiona. Kana tikazvitangisa pamushini wedu, tichaona kuti hazvina basa sei, uye nekuremekedza mafaera ehurongwa, null. Zvakare, kusiyana neanoshanda masystem senge Windows, haufanire kuve nemubatsiri mukana wekuita zvakajairika mabasa nezvirongwa zvinowanzo shandiswa nevakajairika vashandisi
"Uye ivo havafanirwe kunge vari mudzi wekupinda sisitimu iri kure, mune iyo Slapper, honye iyo, ichishandisa kushushikana muApache's SSL (zvitupa zvinobvumidza kutaurirana kwakachengeteka), yakagadzira yayo yega network yemichina ye zombie munaGunyana 2002.".
Uyu muenzaniso haurevi hutachiona, asi honye. Musiyano wakakosha kwazvo: honye chirongwa chinoshandisa sevhisi yeInternet kuzvitumira. Izvo hazvina kukanganisa zvirongwa zvemuno. Naizvozvo, zvinongobata maseva chete; kwete kumimwe michina.
Makonye agara ari mashoma kwazvo uye ane zviitiko zvisingakoshe. Ivo vatatu vakakosha chaizvo vakazvarwa muma80s, nguva iyo Internet yaive isina mhosva, uye munhu wese aivimba munhu wese. Ngatirangarirei kuti ndivo avo vaibata sendmail, zvigunwe uye rexec. Nhasi zvinhu zvanyanya kuoma. Kunyangwe isu tisingakwanise kuramba kuti vanosara uye kuti, kana zvikasadzorwa, vane njodzi huru. Asi ikozvino, nguva yekuita kuhonye ipfupi. Iyi ndiyo kesi yeSlapper: gonye rakagadzirwa panjodzi yakawanikwa - uye yakaraswa - mwedzi miviri chisati chaonekwa honye pachayo.
Kunyangwe uchifungidzira kuti munhu wese anoshandisa Linux aive neApache akaisirwa uye achimhanya nguva dzese, kungo gadziridza mapakeji pamwedzi kungadai kwakave kwakakwana kudarika kusamboita chero njodzi.
Ichokwadi kuti bhagi reSSL rakakonzerwa naSlapper raive rakakosha - pachokwadi, chipembenene chikuru chakawanikwa munhoroondo yese yeSSL2 uye SSL3 - uye nekudaro yakagadziriswa mukati memaawa. Iyo mwedzi miviri mushure mekunge dambudziko iri rikawanikwa nekugadziriswa, mumwe munhu akaita honye padumbu rakatogadziriswa, uye kuti uyu ndiwo muenzaniso wakasimba kwazvo unogona kupihwa sekukuvara, zvirinani kuti zvinokurudzira.
Semutemo wakajairika, mhinduro yehonye haisi yekutenga antivirus, kuiisa uye kutambisa nguva yekomputa kuichengeta ichigara. Mhinduro ndeyokushandisa iyo yekuchengetedza yekuvandudza system yekuparadzira kwedu: kuve nekugovaniswa kwekuparadzira, hakuzove nematambudziko. Kumhanya chete masevhisi atinoda zvakare izano rakanaka nekuda kwezvikonzero zviviri: isu tinosimudzira mashandisiro ezve zviwanikwa, uye tinodzivirira matambudziko ekuchengetedza.
"Ini handifunge kuti musimboti haukanganisike. Muchokwadi, kune boka rezvirongwa zvakashata zvinodaidzwa kuti LRK (Linux Rootkits Kernel), ayo akavakirwa chaizvo pachokwadi chekuti vanoshandisa kusagadzikana mune kernel module uye kutsiva iyo system mabhinari.".
A rootkit inonyanya kernel chigamba iyo inobvumidza iwe kuviga kuvapo kwevamwe vashandisi uye maitiro kubva kune zvakajairwa maturusi, nekuda kwekuti ivo havazowoneka mune / proc dhairekitori. Chinhu chakajairika ndechekuti vanoishandisa pakupera kwekurwisa, pakutanga, vari kuzoshandisa njodzi iri kure yekuwana mukana kumuchina wedu. Ipapo ivo vanozoita akateedzana ekurwisa, kuwedzera maropafadzo kudzamara vaine mudzi account. Dambudziko pavanoita nderekuisa sevhisi pamushini wedu pasina kuwanikwa: ndipo panopinda rootkit. Mushandisi akagadzirwa uyo anozove mushandisi anoshanda webasa ratiri kuda kuti rihwande, vanoisa rootkit, uye vanovanza zvese izvo mushandisi uye nemaitiro ese emushandisi iyeye.
Kuvanza kuvapo kwemushandisi kunobatsira kuhutachiona chinhu chatinogona kukurukura kwenguva refu, asi hutachiona hunoshandisa rootkit kuzvimisikidza pachahwo hunoratidzika kunge hunonakidza. Ngatimbofungidzirai mechanics yehutachiona (mu pseudocode):
1) Utachiona hunopinda muchirongwa.
2) Tsvaga iyo kernel sosi kodhi. Kana zvisiri, anozviisa iye.
3) Gadzira iyo kernel yesarudzo dzemahara dzinoshanda kumushini uri mubvunzo.
4) Unganidza iyo kernel.
5) Isa iyo nyowani nyowani; kugadzirisa LILO kana GRUB kana zvichidikanwa.
6) Dzorerazve muchina.
Matanho (5) uye (6) anoda rombo remidzi. Izvo zvakati omei kuti nhanho (4) uye (6) hadziwanikwe nehutachiona. Asi chinonakidza ndechekuti kune mumwe munhu anotenda kuti kune chirongwa chinogona kuita nhanho (2) uye (3) otomatiki.
Semhedzisiro, kana tikasangana nemumwe munhu anotiudza "kana paine michina yeLinux pachave nemavhairasi akawanda", uye achikurudzira kuti isu "tine antivirus yakaiswa uye tigare tichigadzirisa", zvinogona kunge zvine chekuita nekambani inotengesa antivirus uye inogadziridza . Iva nekufungidzira, pamwe muridzi mumwe chete.
Ichokwadi kuti kune yakanaka antivirus yeLinux. Dambudziko nderekuti, ivo havaite zvinopesana nevamiriri veantivirus. Basa rayo kusefa tsamba inopfuura kubva kune malware uye mavhairasi kuenda kuWindows, pamwe nekuona kuvepo kwehutachiona hweWindows mumafolda anotumirwa kunze kweSAMBA; saka kana tikashandisa muchina wedu senzira yetsamba kana seNAS yemashini eWindows, tinogona kuvadzivirira.
Hatisi kuzopedzisa mushumo wedu tisingataure nezveiyo huru antivirus yeGNU / Linux: ClamAV.
ClamAV yakasimba kwazvo GPL antivirus iyo inounganidza kune mazhinji eUnix anowanikwa pamusika. Iyo yakagadzirirwa kuongorora zvakanamatira kune email mameseji anopfuura nepachiteshi uye nekusefa iwo kune hutachiona.
Ichi chishandiso chinobatanidza zvakakwana ne sendmail kubvumira kusefa kwehutachiona hunogona kuchengetwa mumaseva eLinux anopa tsamba kumakambani; kuve nehutachiona dhatabhesi iyo inovandudzwa zuva nezuva, iine dhijitari rutsigiro. Iyo dhatabhesi inovandudzwa kakati wandei pazuva, uye iri basa rine hupenyu uye rinonakidza kwazvo.
Iyi purogiramu ine simba inokwanisa kuongorora mavhairasi kunyangwe muzvibatanidzwa mune mamwe maitiro akaomarara kuti avhure, senge RAR (2.0), Zip, Gzip, Bzip2, Tar, MS OLE2, mafaera eMS Cabinet, MS CHM (HTML Yakadhindwa), uye MS SZDD.
ClamAV zvakare inotsigira mbox, Maildir, uye RAW tsamba mafaera, uye Anotakurika Anogoneka mafaera akaomeswa neUXX, FSG, uye Petite. Clam AV uye spamassassin vaviri ndivo vaviri vakaringana kuchengetedza edu Windows vatengi kubva kuUnix mail maseva.
Kumubvunzo Pane kusagadzikana muLinux masisitimu? Mhinduro yacho hongu.
Hapana munhu mundangariro dzavo chaidzo anopokana nazvo; Linux haisi OpenBSD. Chimwe chinhu iwindow yekushomeka iyo iyo Linux system ine iyo yakanyatsogadziriswa. Kana isu tikazvibvunza isu, pane maturusi ekushandisa mukana wemakomba ekuchengetedza aya, nekuashandisa? Zvakanaka, hongu, asi aya haasi mavhairasi, iwo anoshandiswa.
Hutachiona hunofanira kukunda mamwe matambudziko akati wandei akaiswa seLinux kukanganisa / dambudziko nevadziviriri veWindows, uye izvo zvinonetsa kuvapo kwehutachiona chaihwo - tsanga dzinodzoserwa, shanduro zhinji dzemashandisirwo mazhinji, migove mizhinji, zvinhu izvo hadzisi nyore kupfuudzwa pachena kune mushandisi, nezvimwe--. Ikozvino dzidziso "mavairasi" inofanirwa kuiswa manyore kubva kumidzi account. Asi izvo hazvigone kutariswa sehutachiona.
Sezvo ini ndichigara ndichiudza vadzidzi vangu: musanditenda ndapota. Dhawunirodha uye gadza rootkit pamushini. Uye kana iwe uchida zvimwe, verenga kodhi sosi ye "mavairasi" pamusika. Chokwadi chiri mukodhi yekodhi. Zvakaoma kuti hutachiona hwe "kuzvizivisa" hurambe huchiitumidza saizvozvo mushure mekuverenga kodhi yayo. Uye kana iwe usinga zive kuverenga kodhi, imwe chete yakapusa chengetedzo chiyero chandinokurudzira: shandisa mudzi account chete kugadzirisa muchina, uye chengetedza zvekuchengetedza zvidzoreso.
Izvo chete neizvozvo hazvigoneke kuti mavhairasi apinde mauri uye hazviite kuti makonye kana mumwe munhu arwise muchina wako zvinobudirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Zvimwe » Mavairasi muGNU / Linux: Chokwadi kana Ngano?
Nezvirikuitwa zvezuva nezuva zveDistro Linux OS yako yakachengetedzwa zvizere.
Mushure mekuverenga izvi, hukuru maererano nekushomeka uye kuchengetedzeka kwese zvichienzaniswa neWindows zviri pachena, kubva pane zvandakaverenga zvinonetsa kushandisa kushushikana muGNU / Linux, chokwadi ndechekuti mune ino OS ndagara ndichishamiswa nekumhanya ne iyo iyo yekuchengetedza matambudziko inogadziriswa, senge nguva iyoyo makumi mana ekukuvara akaonekwa muUbuntu Linux kernel, uye musi iwoyo iwoyo vakatogadziriswa ...
Ehe hongu, izvi zvinhu zvinofanirwa kuverengerwa neavo vanozvizivisa ivo veGurus neComputer Scientists uye havana kumbobvira vasiya Windows. Kana isu vashandisi veGNU / Linux tichitaura nezve mabhenefiti eOS, haisi yekurwisa Windows, imhaka yekuti isu tinoziva zvakajeka izvo zvakanakira / zvakaipira zveumwe neumwe wavo
OO, tsananguro iri nani kumusoro wenyaya "evhangeri" Linux -> Win zvisingaiti.
tsananguro yakanakisa ...
kunyangwe ini ndichingova mushandisi wakajairika, ndine kusahadzika uye ruzivo senge chero ani zvake, asi ndinogara ne linux, kubvira 2006 ...
Kuti vakurukure neshamwari! Ivo vanogara vachigunun'una kana linux iyi, iyo kana imwe yacho ...
Ini zvirokwazvo ndinokurudzira kuverenga iyo PDF ... chaizvo, kugona, kupenya, kukwana ...
Kuidzikisa !!! 🙂
Chaizvoizvo ... Ndiri kuzvinyora izvozvi, kuti zviite kuti zvive nyore kune wese munhu kuti averenge 😀
Mukati mechinguva ini ndinogadziridza iyo posvo uye ndisiye iyi link kune iyo PDF hongu, asi ini ndichaisawo zvirimo zvacho apa.
Hei! Ndatenda zvikuru nezvakanyorwa!
Chinyorwa chinonakidza kwazvo!
Ini ndanga ndisingazive kuti iwe unoverenga kubva kuLinux Yoyo as seni pamwe naMuylinux nedzimwe XD
Yoyo anogovera akati wandei ezvinyorwa zvedu zveG + haha… isu tinomutenda iye nekuda kweiyo 😀
Muchokwadi… anga achitoverenga kwenguva yakati rebei
Ndiri kufara nazvo, iri peji rakanaka kwazvo
Isu tinofara kuti iwe unonzwa zvakanaka nezve yedu blog ^ ^
Ini ndinoziva vanhu vazhinji vakaona iyo Loch Ness Monster kupfuura vakaona maLinux hutachiona
Ini ndaidawo chirevo hehehe
Pasina kupokana 100% yakakurudzirwa, zvinonzwisisika zvisingaiti, ndinokutendai zvakanyanya nekugovana elav!
Manuel Villacorta akadaro
Chinyorwa chakanaka kwazvo. Uye ndakafunga kuti kana ndikafumurwa nekusava neantivirus.
Kune zvimwe zvese, zvinoreva kuti kana chingave chinotakura hutachiona hwemahwindo, hongu hazvaizotikanganisa, asi kana tikakwanisa kuchipfuudza kune vamwe vashandisi vewindows, handiti?
Pamusoro pezvo, zvakadii kana isu tikamhanya chirongwa chakabatiswa newaini? chii nezvazvo
Pindura kuna Manuel Villacorta
Gamuchira Manuel Villacorta:
Ndo izvo zvinoshandiswa nevazhinji vashandisi kufunga. Muno munyika yangu mamwe makambani akatoisa Kaspersky (Linux vhezheni) paLinux PCs (yakakosha iyo redundancy) ...
Nezve Waini, ini handina kukwanisa kukuudza, asi ini ndinofunga kuti kana ikabata chimwe chinhu, chinofanirwa kunge chiri chishandiso ichocho mukati meWine .. 😕
Chinyorwa chakanakisa, kunyanya nekuti chinopa nharo dzinoenderana nehunyanzvi dhata uye kwete kungotaura chete
Zvimwechetezvo .. Wakafungei? Ini ndinofungidzira kuti kwakanaka here? Pane zvaunazvo kana uchikurukura nemumwe munhu paFb nezvenyaya yacho
Zvakanakisa kunyaradza chero munhu anoti kune mavhairasi angaziva muGNU / Linux.
Ini ndichave nayo muzviratidzo zvekuti ndirini pandinofanira kupa pela pamwe nefasi.
Izvo zvaive zvakakodzera kuti iverengerwe 😀
Zvandinofunga ndezvekuti kudzivirira hakutomborwadzi, kushandiswa hakutombokwanisi kutipinda asi Trojan iri nyore.
Kana iri muzana, iri zvakare nekuda kweiyo Linux mvumo system
LOL neLoch Ness chikara xD
Zvakanaka ... ini ndaive mutadzi wekuda kugombedzera vamwe vangu kushandisa Linux nechikonzero chimwe chete icho vashandisi veWindows vakashora distros: hapana kana munhu anoishandisa, kashoma kuti chimwe chinhu chizoitika kwavari ... Ndinoziva, kukanganisa kwangu. Asi neizvi ini ndichakwanisa kutaura kuti nei zvakanaka ... Kunyangwe ini ndichatofanira kuzvitsanangura nemapere nemaapuro nekuti havasi vazhinji vevandinoshanda navo vanganzwisisa izvo pamwe chete nezvazvinoita lol
Ndatenda zvikuru zvakadaro nekununura iyi info: 3
Zvakanaka, ndatenda neruzivo
Chaizvoizvo ndinoda kuwana bhurogu yakadai asi ye windows….
Kwete nekuti Muy ane chirwere chakanyanya
Kune imwe, http://www.trucoswindows.com/ Ivo vakanyanya kutenderedza, ivo havasi fanboys.
Pane imwe nhambo ndakaverenga mupiro kuti akakurudzira sei kushandisa ubuntu kugadzirisa dambudziko windows, asi yakanga iri nguva refu yapfuura.
MaVirusi akafanana nezvose, akaipa asi zvirinani anodyisa vanhu vazhinji XD kuti zvikasadaro ndinopokana kuti vangazoshanda, zviri pachena kuti muLinux zvinonetsa kana kuti hazvigoneke kuti iwe upinde imwe, asi nharo iyoyo haina kukwana kushandisa Linux , nekuti zvakafanana zvaizoshanda kuMac osx.
Kune zvimwe zvinhu zvakakosha kupfuura izvo zvekushandisa Linux.
Chii zvakare chemahara? xD
Chinyorwa chakanakisa, nekutenda nekuchibatanidza icho, chichava chinotibatsira kwazvo.
Ndinoda kuwedzera kucherechedza:
"MuLinux hamuna mavhairasi nekuti vagadziri vezvirongwa zvakashata izvi havapedze nguva vachiita chimwe chinhu cheSystem inoshanda iyo chero munhu anoshandisa"
Chaizvoizvo, chirevo ichi hachisi chaicho kana: mazhinji emaseva ari paInternet - anoshandiswa nemamiriyoni evanhu - anoshanda paGNU / Linux masystem (maGoogle, semuenzaniso, uye havangamiriri mhuka yakanaka yevanogadzira here? utachiona?); 91% yemakomputa mazana mashanu ane simba kwazvo munyika, zvakare [http://i.top4.org/stats].
Muchidimbu, kana pasina hutachiona "chaihwo" hunopesana neGNU / Linux, hazviitwe nekushomeka kwechido, asi nekuda kwekunetseka kwehunyanzvi (zvakanyatsotsanangurwa muchinyorwa).
uye mamwe maUNIX-based masisitimu? akadaro
Regerera kusaziva kwangu, asi aripi mamwe masisitimu ayo akavakirwa paUnix, XNU kana BSD? Mukupedzisira GNU / Linux yakavakirwa paUNIX uye ndinoziva kuti masisitimu akaita seAIX ari nani maseva nekutenda kuchengetedzeka kwavo, iniwo ndinotaura nezveMacOs X uye FreeBSD.
Ini ndinofunga kuti chinyorwa, kunyangwe chikaita sei, hachifanirwe kunge chakavakirwa paLinux chete, kunyangwe iyi iri webhusaiti yakazvipira
Mhinduro kune uye imwe UNIX-yakavakirwa masisitimu?
yaive magazini yakanaka kwazvo (ese linux), zvinorwadza zvakaitika, ndatenda nekununura chinyorwa! Mufaro!
Uye chii chinofadza? : S
Thu ... Ndakamhanya murairo find iyo yavanopa ipapo uye ndinofunga haisati yapera, kune vanopfuura 2000 "vanogona kutapukirwa" (?)
Hehe, ini handibvise Ubuntu, pachokwadi neiyo distro ini ndakatanga kushandisa GNU / Linux ndega, uye ndakada kunotora kunonzi Oz Unity, kudzamara ndazoona kuti ini ndanga ndisingade akawanda mafomu anosanganisira nekusarongeka, uye pane kudaro, ivo vakawedzera kusagadzikana muOS yangu. Naizvozvo, uye mushure mekuverenga zvakakwana uye kuyedza akasiyana madhiri, ndakafunga kutamira kuDebian, kwandinogadzikana nayo, uye chete nezvandinonyatsoda. Uye kana ini ndichida chimwe chinhu, hapana dambudziko, zvirokwazvo ndichachiwana mumahofisi epamutemo, kana zvisiri, kuunganidza zvinyorwa. Ah! Uye nenzira yemunyori, yakanakisa chinyorwa. Zvido.
Zvakawanda zvacho zvinoonekwawo kwandiri, asi iwo maforodha, zvakare chinhu chete chinoitwa nemurairo, kutsvaga mafaera ane mvumo yekutapukirwa, zvingave zvakakodzera kubvisa zvimwe zvibvumirano, handizvo? Ipapo ini ndichatarisa neClamAV linuxero inondikanda tsvina, ndinoishandisa kuuraya utachiona zvikamu zvine mahwindo
tarisa kutenda neruzivo asi zvinopesana nezvigadzirwa kukuudza kuti hapana munhu anoshandisa linux kana isu vedu vanoziva chokwadi nezve microsoft
Pindura kuna edwar
Edward natali akadaro
Mhoro, shamwari! Zvakadii, ini ndakazvipira kumasystem senge iwe, ndiri kunyora kukukorokotedza iwe, chinyorwa chako ichokwadi chakachena, zvakare CHINONYANYA !!! uye penya !! nezvose zvakakosha. zvakanaka kuzviverenga! Ndatenda zvikuru, Regards, Eduardo Natali
Jorge Manjarrez Lerma akadaro
Microsoft uye kunyanya ayo masisitimu anoshanda angangoita makore gumi kuseri kweNIX masystem (nzwisisa Unix, Linux neMacOS), kunyangwe ichifanirawo kuzivikanwa kuti mumamiriro mazhinji imhosva yevashandisi uye Kukwanisa kweMicrosoft kupa zvinyorwa zvishoma zvinodiwa pakuchengetedza system. * NIX masisitimu ane echinyakare maitiro ayo nehunhu hwavo anoita kuti kupararira kweanotyisa ruzivo ruzivo zvisizvo zvisingaite (kwete zana% risingapindike). Hazvireve kuti kune vashoma vanhu vanoshandisa * NIX uye kunyanya Linux, asi kugona kweaya masisitimu akanaka kwazvo uye ehunhu, chimwe chinhu icho windows brand haina sekutanga (rangarira Win Vista semuenzaniso).
Pindura kuna Jorge Manjarrez Lerma
Philip Salazar Schlotterbeck akadaro
Sezvo ini pandakaona iyo ubuntu 7.04 neye clam ndakaziva kuti panofanira kuve nehutachiona hwegnu / linux
Pindura Felipe Salazar Schlotterbeck
Chokwadi ndechekuti chinyorwa chakanyanya kunaka. Basa chairo uye nguva yekupindura mibvunzo yakawanda zvekuti pane izvi ... makorokoto angu.
Chokwadi chandakanga ndamboona, mamwe mavhairosi musystem asi yaive mhosva yangu, zvese zvakagadziriswa neyakagadziridzwa.
Pindura kuna jhoedram
MaTrojans muLinux, aripo sezvaari muMac OSX uye zvakanyanya muWindows, nemusiyano wekuti muLinux unonyanya kuoma, uye kana tikataura nezve open bsd, zvakatonyanya kuoma.
Ndatenda zvikuru nechinyorwa ichi! Ini ndinofunga inobatsira kwazvo kune vese avo vatsva vakaita seni vanofarira kudzidza zvishoma nezve mashandiro eLinux. 🙂
Kunyangwe ichi chinyorwa chakatsikiswa kwemazuva akati wandei, hachina kurasikirwa nekushanda kwayo, saka, nemvumo yako, ndinoteedzera-kunama zvikwereti zvako. 😉
Fernando MS akadaro
Inonakidza kwazvo, pasina kupokana ndichafanirwa kurodha pasi iyo chinyorwa chePDF kuti ndikwanise kuiverenga uye nekudaro ndinotora yangu mhedziso.
Pindura Fernando MS
Kana iniwo ndisina kufunga, ndaive nekombuta yebhodhi uye yakadzora hutachiona hwakanyanya kubva paInternet uye hapana, asi rimwe zuva ndakaburitsa kernel yangu uye ndichiongorora ndakagadzira hutachiona, sezvo ndaifunga kuti hapana chingaitika, ndakaimhanya, nekuti zvese shit kuchikoro vakaedza kundigadzirisa, imbwa yaisagona.
Hutachiona hwangu hwakaburitsa madhiraivha, mapakeji uye ini ndikabvisa zvirongwa, pandakagadzirisa sezvandaigona pese pandaitanga chikamu, chakandidzorera kumenyu yekutanga musangano.
postcript (komputa yangu yaitendwawo kunge isamsung uye iri toshiba, yakavandudzwa)
Chinyorwa ichi chekare kwazvo, asi ruzivo rwuchiri kushanda, ndakabvisa kusahadzika kwakawanda ... Maita basa
Zvakanaka, ndinofunga kuti linux haina kukomba sezvavanotaura, nekuti ese windows uye linux vanowanzove nehutachiona, asi izvi hazvireve kuti linux haina mabasa ari nani pane windows ...
Kutenda neunyanzvi hwako, zvakandibatsira zvakanyanya, ini ndichangotanga muDebian uye ndinoona zvinhu zvakawanda ndichifarira.
Solomon Benitez akadaro
Ini neMint ndakaisa iyo Rootkit Hunter. Ini ndaishandisa chaizvo uye handina kuona imwechete rootkit yakawanikwa kubva kune iyo terminal. Saka zvainyanya kunakidza pane kudikanwa kwekuishandisa.
Zvino zvandinoshandisa OpenSUSE handina kunetseka nekuiisa. Iyo zvakare inyaya yeyakajairika pfungwa: paunotanga muLinux nyika, iwe unoziva nezve kudiwa kwekusiya mudzi account yezvakanyanya kukosha zvido uye gadzira imwe mhando yemushandisi. Saizvozvo, iwe hausi kuzoisa iyo password password pahwindo rega rinobuda usingazive maitiro aachaita.
Ini ndinofunga kuti ngano yemavhairasi muLinux ndeimwe yezvipingamupinyi zvepfungwa zvekukunda mune vamwe vanhu, senge maviri eakanyanya: "Ini handinzwisise Linux, handizive mashandisiro eLinux" uye kuda kumutsa zvese zvese, kutarisira Linux inoshanda system yakafanana kana yakafanana neiyo yeMicrosoft.
Pindura kuna Salomón Benítez
Chinyorwa ichi chakangonaka, ndakafunga kuti chikuru, maita basa nekuchinyora. Ndakaiverenga kusvika pabutiro. Makorokoto, nechinyorwa chino zvese zvinotsanangurwa uye, kune rangu divi, zvakagadziriswa 😀
Mavhairasi anogona kugadzirirwa masisitimu ese. Zvakare, ini ndinogona kuisa kodhi ye backdoor ye linux kubva kune imwe tambo yekodhi. Mubvunzo hausi kuvapo kwemavhairasi, asi mukana wehutachiona.
Mhinduro (mumaonero angu)
Unogona kugadzira mavhairasi mu linux: Ehe
Kune hutachiona mu linux: Vashoma, uye pasina budiriro
Pane mikana yekutapukirwa: Vashoma
Pindura kune desikoder
Nenzira, yeiyo rekodhi, ini ndinovenga windows, uye ini handidzivirire. Kana ikaonekwa mumushandisi-mumiririri imhaka yekuti ndiri muchitoro chekufona nekuti handina internet pamba izvozvi.
Matias Demarchi akadaro
Ndakaverenga zvese, ini ndinoona kuti haisi chete hushoma huwandu hwemaburi ekuchengetedza, asi nekuda kwekugadzirwa kweiyo kernel pachayo, asi nei Android ichitambura zvakada kuita seWindows kubva kumatambudziko ehutachiona uye kuderera kwenguva refu?
Pindura kuna Matías Demarchi
nekuti Android vashandisi kazhinji havazive manejimendi yavo uye nekuisa chero chinhu kubva chero kupi kunze kweiyo google haina kufarira kuchengetedzeka mu Android nekuti iri bhizimusi rine muto kuti haina kuchengetedzeka zvakare pane musiyano mukuru pakati pe OS GNU / Linux uye Android kunyangwe iine imwechete kernel
"Nekuti vashandisi vea android kazhinji havazive maitirwo ehurongwa hwavo nekumisikidza chero chinhu kubva chero"
Ndiyo mhinduro ingashanda kana tikazvitaura kune chero sisitimu inoshanda.
Saka chikwereti hachina kumbove chiri mukugadzirwa kwesystem uye iko kukanganisa kwagara kuri mune (ab) kushandiswa kwemushandisi.
Kwete kwete, iwe unofanirwa kuverenga zvese zvakare, nyatso tarisa uye usadonhe mumutambo wakapusa wekugadzira hutachiona, idya chero kutadza kwemakomputa. Iyo iripamusoro yakati rebei asi zvakajairika kutapukisa chishandiso chinoshandisa linux kernel ine spyware uye malware inogara iri mhosva yemushandisi ari kupa mvumo kune zvese zvaanoisa, kungave kuri android kana windows. Google inoita zvazvinogona ndosaka ma terminals ane midzi yekuwana asiri kupihwa.
Ichokwadi ndechekuti Google haina hanya kana haizombonetse nenzira yakakomba nezve kuchengetedzeka kweiyo android uye zvinorwadza nekuti Android ichave nemukana wekuve wakakura system asi hazviite kuti vanyongana kubva kufekitori ye android nekuda kwekutonga kweGoogle kunosanganisira kumashure kuitira kuti masangano akaita seNSA ave nekuwana kune yako yakavanzika data.Ko iko kunetseka nezve kuchengetedzeka kwesystem? zvakare Gabo akarurama vashandisi vazhinji asi kwete vese vanodzika masisitimu avo vasingazive kakawanda kuti iri banga rinocheka nekwose, kuti vanhu chete vanoziva zvavanoita ndivo vanofanirwa kushandisa.
Nekuti vazhinji Android vanoishandisa semidzi. Asi hutachiona hahuwanzoitika. Zvakanaka chaizvo kuti iyo Galaxy haibvumire iwe kuti uve mudzi, saka ini handina kumbobatwa nehutachiona, kana mapiritsi angu.
Nekuti zvese zvinokakavara muchinyorwa ndezvekunyepedzera-zvehunyanzvi zvisina maturo.
Vanokutengesera pfungwa yekuti "kusavapo" kwemavhairasi hakuna kukonzerwa nemugove wakadzika wemusika asi nekuti iyo Linux kernel ine simba kwazvo inodzivirira kupararira kwayo, asi ipapo iyo Inoshanda Sisitimu inoonekwa neiyo kernel uye yekushandiswa kukuru uye kune hutachiona, kuderera, sungirira uye nemhando dzose dzematambudziko.
Iko hakuna dhizaini inodzivirira kuvapo nekupararira kwemavhairasi, nekuti ivo vanosvika paWindows nenzira imwechete iyo ivo vanokwanisa kusvika kune chero system: Mushandisi anoitsvaga, anoiisa pakombuta yake uye anoitisa ichiregeredza chero mhando yambiro. Kana izvo zviitiko zvikasaitika, hutachiona hunowanzoita zero kunyangwe paWindows.
Kuderera kunoitika kana iwe ukaisa / uninstall crap. Iko hakuna system uye dhizaini immune kune crap. Iyo inonyanya kufarirwa Anoshanda Sisitimu iri, iko kwakawanda kuitika kuchavepo, chero kwavo mhando uye kuzvipira.
Uye kucherechedza kudzikira munguva refu, zvakafanira kuti iyo system iiswe kwenguva refu!, Mamiriro ayo kazhinji asingatomboitika muLinux nekuda kwemafomati ezuva nezuva, kungave kuchinja distro, ku "kugadzirisa" iyo distro kana kuti uwanezve kubva pabreak zuva nezuva raakange ave naro.
Emilio Moreno akadaro
Ruzivo rukuru, rwakajekesa zvakawanda nezvehutachiona uye Linux
Pindura Emilio Moreno
Huye, hapana system iri 100% yakachengeteka uye inosanganisira GNU / Linux
Murume mutete akadaro
Asi antivirus haingokudzivirira iwe kubva kumahutachiona, kune malware kwese kwese, uye yakanaka AV inogona kukudzivirira kubva pairi. Chero ani zvake asingashandisi antivirus nekuti iye ane GNU / Linux (Ini ndinoishandisawo), asi ari pachena kutyisidziro zhinji.
Pindura kuna Slenderman
Iwe unofanirwa kufunga kuti antivirus mune unix masisitimu haibatsire zvakanyanya, kana pamwe izvo zvavanotambura zvakanyanya zvichave xploits uye nemagadziriso akamisikidzwa zvingave zvakakwana, hongu kana tichifunga nezve mamwe ma distros (mune iyo GNU / Linux) ivo vanogadziridza yavo tsanga kusvika ka2 pagore.
pane chimwe chinhu icho hutachiona hunofuratira zvachose dhadhi kana rpm mapakeji, vanhu havawone kuongorora mapakeji uye ivo vanoda midzi yekuisa
Thomas Sandoval akadaro
Ichokwadi, asi vazhinji vedu tinoshandisa inoenderana dura. Kune vanhu vakazvipira kune izvi kwenguva yakareba uye vane nhoroondo yekushanda muLinux, dzimwe nguva izvo zvitupa zvinobatsira kuziva kana kuvimba kana kwete.
Pindura Tomás Sandoval
yakanakisa post, ini ndanga ndisingazive zvinhu izvi nezve linx, ndatenda zvikuru nekugovana.
Pindura kuna oscar lopez
Manuel Fernando Marulanda akadaro
Yakanaka chinyorwa, chakandibatsira zvakawanda kujekesa kusahadzika mumusoro mangu.
Pindura kuna Manuel Fernando Marulanda
Ndatenda, ndine zano shoma rehurukuro uye chinyorwa chakandibatsira zvakanyanya. Kwaziso!
Webhusaiti yakanaka, aisaziva.
Ini ndaifarira chaizvo tsananguro yako yehutachiona.
Ini ndinokubatanidza iwe kubva kune yangu webhusaiti,
Juan Rojas akadaro
Mhoroi, ini ndinobata zvinopfuura zviuru zvitatu zvakasiyana zveLinux server mawebhusaiti, nhasi ndinogona kukuudza kuti kana ndakave nemavhairasi uye ndakaadzikisira neclam av, kunyangwe paine firewall ine mitemo yakanaka, haina kupararira. Zvakafanana asi dai paivepo
Dambudziko, iwo maemail uye peji matemplate ekusavimbika mvumo
Pindura Juan rojas
Waive nehutachiona hupi? Nekuti hutachiona hunopinda mutsamba, kunyanya kubva kune anotumira achishandisa Windows, hazvishamise, asi kubva ipapo kukanganisa system inoenda kure kwazvo. Saka ndinobvunza zvakare kuti yaive hutachiona hupi?
kwazvo, yakanaka, yakanaka ruzivo
Inonakidza. Zvichida nekuda kwekushandisa kwakanyanya kwemidzi paAroid, pane mavhairasi eAroid. Asi hei ivo vari kushomeka.
Ini ndinofungidzirahlengwareware haiite basa rayo paLinux futi.
Kwaziso uye makorokoto epositi. Zvakanyanya kunaka !!!
Pindura kuna G
"HAVASI KUTAMBUDZA NGUVA PAKUgadzira CHINHU CHINOGONESESA NEYEKUTANGA HWEKUTANGA SYSTEM, KUNYANYA, PASI PASI PEMAHARA 24"
ndizvo zvichaitika kana ikaonekwa ikaitwa pachena.
Zvakanaka, hapana makomputa ane hutachiona uye vashandisi vavo havawani kusvikira nguva yapera.
Kune mamwe mavhairusi anouya kubva kufekitori muBIOS, firmware, nezvimwe ... kunyangwe zvinogadzirwa nemasangano ehurumende. Pasina mubvunzo kutaura, kune akawanda anoshanda mavairasi eLinux kana OSX, kunyangwe asiri mazhinji seWindows, hongu.
Zvese zvaunotaura ndezvechokwadi kana zvishoma chokwadi, asi kwete zvakawanda. Unovimba nengano kuti ubvise dzimwe ngano….
Iva neDebian server neKernel 4 kwemwedzi mitanhatu yakabatana neinternet ichishandira static html (chinhu chiri nyore kwazvo) uyezve unogona kudzima zvinopfuura makumi masere muzana zvemashoko ako.
Izvo hazvigoneke kuti mubiridzi apinde mune imwe os ane hutachiona uye spyware.
Ini ndinofunga makore gumi nemaviri gare gare, isu tinokodzera kuyeuchidzwa kwechinyorwa chino. Kurukurai hutekinoroji hutsva, kutyisidzira kutsva ... uye kana isu tave tisina hutachiona kana kwete.
Zvikasadaro, yakanakisa chinyorwa (icho chandakatoverenga maeon apfuura).
Alejandro Alvarez placeholder mufananidzo akadaro
Kana ini ndikaiswa Windows neLinux, hutachiona hunogona kupinda pc yangu pandinoshandisa Linux ndobva ndachinjira kuWindows?
Iyo nyowani Xfce kuverenga yakanga isiri chinhu kunze kwekuseka
SOPA mutemo, freezer ... izvozvi